Masaajidda Muslimiinta Tajakistan Oo Lagu Amray In Ay Uruuriyaan Lacag Lagu Dhisayo Sanam. – Calamada.com
calamada September 9, 2018 1 min read
Xukuumadda dabadhilifka wadanka Takajistan ayaa bilaawday olole ay dhaqanka uga fasahaadinayso muslimiinta wadankaasi ku dhaqan ee caanka ku ah diin jaceylka.
Ololahan ayaa ah mid lagu dhisayo Tallaayin ama asnaam calaamad u ah mid kamida Hoggaamiyaashii dowladdii shuuciyadda Soofiyeetiga dalka Ruushka.
Wararka ka imaanaya Tajakistan ayaa xaqiijinaya in dowladda hoos ay amar kusiisay imaamyada Masaajidda in lacago tabarucaad ah ka aruuriyaan jamaacada salaadaha ku tukada masaajidda lacagtaas oo lagu dhisayo taallo dahab ka sameysan oo lagu weynaynayo Vladimir Lenin oo ah aas -aasihii Midowga Soofiyeeti.
Hoggaamiyaasha Muslimiinta magaalada Shahartoos ee wadanka Tajakistan ayaa tallaabadan diidmo ka muujiyay, Masjid walba wuxuu isbuucii uruurinayaa lacag dhan $100 si lacagtaas loogu dhiso sanam.
Wadaada xumayaal taageersan xukuumadda ayaa Ololahan horboodaya balse mashruucan lacagta loogu aruurinayo dhismaha Sanamka Vladimir Lenin waxaa diiday dhalinyarada Muslimiinta.
“Kuwani ma ahan A’imada Muslimiinta ee waa kuwa Sanamada Caabuda” sidaas waxaa lagu yiri farriimo dhowr ah oo muslimiinta Tajakistaan ay ku faafiyeen baraha bulshada.
Mas’uuliyiinta dowladda dabadhilifka Tajakistan waxay sheegayaan in magaalooyinka waaweyn laga taagayo Sanamka Vladimir Lenin waxaana qarashkan masaajidda lagu aruurinayo dib loogu dayactirayaa asnaamta isla Ninkan oo ladajiyay sanaddii 1981-dii.
Tallaabadan ayaa ah ihaano ka dhan ah muslimiinta waxay dad badan layaabeen sida dad muslimiin ah u dhisayaan asnaan islamarkaana dhaqaalaha lagu dhisayo laga aruurinayo Masaajidda oo ah meel alle lagu caabudo.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 29-12-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 30-12-1439 Hijri.